Yileyo ubuhlungu, bayazi konke. Kunjalo-ke likhona ezimpilweni cishe wonke umuntu. Esikhathini esiningi abantu ubhekene migraine, amazinyo noma ezinye izinhlobo ubuhlungu. Cishe abaningi esitolo ithuluzi ezifakazelwe kuleli cala. Nokho, kwenzeka ukuthi lusebenza ngesikhathi esifushane noma iyeke nganoma yisiphi isizathu ukuba siphumelele. Kulokhu, ungakwazi baphendukela izidakamizwa "Ketanov" imiyalelo ukusetshenziswa okuyinto itusa ke njengoba analgesic enamandla esisiza ezimweni ezihlukahlukene.
Ngakho, ukusebenzisa lolu izidakamizwa kanye emizweni eqinile noma okusesilinganisweni okubuhlungu imvelaphi ezahlukene. Kuyasiza futhi lapho dislocation noma ukwa, emathunjini noma amazinyo. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle asikwazi ukwenza analgesic ngenxa yobuhlungu emva kokuhlinzwa, esikhathini kwangemva kokubeletha. Kungaba lula umuthi esikhathini okubuhlungu.
Njengazo zonke analgesics, i- "Ketanov" imfundo on isicelo amanothi Izimo. Asincomi isidakamizwa for esiswini noma izilonda duodenal, isibindi kanye nokwehluleka ukusebenza kwezinso. Phakathi nokukhulelwa kanye lactation izidakamizwa kungavunyelwe, kanye izingane ezingaphansi kweminyaka engu-16. Ngokunakekela linqume isidambisa-zinhlungu iziguli isifuba somoya kanye nabantu asebekhulile. Kulokhu, ukusetshenziswa kwezidakamizwa Kunconywa kuphela inhloso yazo noma isincomo kadokotela.
Iyatholakala "Ketanov" izidakamizwa Ukwakheka engashintshwa ngesimo amaphilisi kanye isixazululo nemijovo. Ingqikithi asebenzayo kuzo zombili izimo ngeke ketorolac, okuyinto akanalo nje analgesic, kodwa futhi isenzo eqeda ukuvuvukala. Kepha, ngokungafani analgesics liphakathi esebenza, akunamthelela lengqondo nemisebenzi umuntu.
Kunconywa ukuba isetshenziswe iDemo. Ukuthola izindlela 'Ketanov "imfundo manual uncoma amahora 4-6 1 tablet, kuye ngokuthi imvamisa nobukhali ubuhlungu. Uma isixazululo isetshenziselwa umjovo (ezimweni eziningi, kuphela emva kokubonisana udokotela), khona-ke ekuqaleni babelwe 10mg intramuscularly. Kancane kancane umthamo kungase kukhule, kodwa esiphezulu yayo ngoba umuntu omdala is hhayi ningi than 90 mg ngosuku. Kufanele usebenzise inani lemali elincane izidakamizwa okuletha umphumela.
Ngaphambi kokuqala izidakamizwa "Ketanov" umkhiqizi abstract kufanele uzifunde ngokucophelela okwanele. Lapho analgesics kungadala imiphumela emibi, okuyinto, nakuba kakhulu ezingavamile, kodwa sihlanganise indawo ebanzi kakhulu. Lezi zihlanganisa ukusabela kabi komzimba, izinguquko sezinyawo (ukuqunjelwa noma isifo sohudo), palpitations, kome nolwelwesi lwamafinyila, ukucindezeleka. Lapho izimpawu zokuqala, udinga ukususa izidakamizwa.
Ngo ukweqisa izidakamizwa semfene kungenzeka ohlelweni kwezinso, kolwelwesi erosive, izilonda ukonakala. Ukwelashwa kulokhu kuzoba lavage esiswini kanye ikhambi ethize engekho, ama-absorbents reception, impatho lingaze.
Labo abakhetha njengenhlangano izidakamizwa analgesic "Ketanov" imfundo manual esixwayisa ukuxhumana yayo izidakamizwa eziningi. Ngakho, musa ukuhlanganisa ngayo thrombolytics, anticoagulants ngokungaqondile, cefoperazone, njengoba kukhona ingozi ukopha pheshana emathunjini. isisu kusebenta namaphilisi kunciphise umfutho wegazi, ukunciphisa umphumela we ketorolac.
ukwelashwa kanye kanye nge-paracetamol akufanele kube isikhathi esingaphezulu kwezinsuku ezinhlanu, uma izindlela ezidingekayo "Ketanov" kungenziwa kuhlangene analgesics kwezidakamizwa. Njengoba izidakamizwa kungabangela ukozela kanye block encane, ukunikeza uma isetshenziswa ukwenza umsebenzi odinga okusezingeni eliphezulu okuhlushwa.
Izidakamizwa "Regidron". Isicelo ukuzinza yamanzi futhi electrolyte ibhalansi emzimbeni
Amandla abantu - intando yeningi: uhlobo isakhiwo sepolitiki isimo
Yokuqothulwa Omkhulu Permian zezinto eziphilayo: izimbangela
Indlela Faka e "The Sims 3" - izindlela
Knock Inzwa: Izindlela (Vaz "Kalina", "Priora", "Toyota", "iNsephe")
RRS Survey: ukulungiselela, ukubuyekezwa
Izithelo Iwusizo inhliziyo. Imifino nezithelo for izitsha inhliziyo negazi: ohlwini
Dream ncwadi. Escape ephusheni